10 Zoo tsara indrindra hitsidihana miaraka amin'ny zanakao any Eropa | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Zoo tsara indrindra hitsidihana miaraka amin'ny zanakao any Eropa
Fotoana famakiana: 7 minitra(Last Nohavaozina: 27/11/2020)
Mandehandeha miaraka amin'ny ankizy mankany Eropa dia mety ho fanamby. Noho izany, tena zava-dehibe ny manampy hetsika vitsivitsy izay tian'ny ankizy, toy ny fitsidihana ny iray amin'ireo 10 zoo tsara indrindra any Eropa. Ny sasany amin'ireo zoo tsara indrindra eto an-tany dia any Eropa. Ao am-pon'ny tanàna tsara indrindra any Eoropa, misy fitoerana masina, ary ny 10 zoo tsara indrindra hitsidihana ankizy any Eropa.
1. Zoo Schonbrunn any Wina
Schonbrunn Zoo any Wina, dia trano fonenan'i 500 karazana biby, satria 1752. Ohatra, ny zoo tranainy indrindra any Eropa dia ny elefanta afrikana sy ny panda goavambe. The 42 hektara Viennese zhao dia miorina ao an-dapa ary manana manintona mahaliana ho an'ny ankizy sy ny ray aman-dreny.
Ohatra, ny trano ala mando ao amin'ny zoo dia replika nataon'olombelona tena ala mando miaraka amin'ny oram-baratra. Rehefa mivezivezy ianao mba hijery tsara ny otrika kely sy volkano vampira. Ankoatry ny, Trano orsa polar, tigra sy cheetah, trano koala sy trano maro hafa an'ny biby mahafinaritra no miandry anao.
Maimaimpoana ny fidirana amin'ny Zoo Schonbrunn any Wina miaraka amin'ny passer Viena. Afaka tonga any ianao miaraka amin'ny U4 Hietzing ambanin'ny tany.
Treviso mankany Venice Train Prices
2. 10 Zoo tsara indrindra any Eropa: Zoo Alpine any Innsbruck
Any amin'ny manaitra Tyrol any Aotrisy, ny zana-kazo Alpine ao Innsbruck dia fonenan'ny mihoatra ny 150 karazam-biby. You’ll find this amazing zoo at the foot of the Nordkette mountain range in the Austrian Alps. Noho izany, raha mikasa ny dia ataon'ny mpianakavy any Alpes ianao, alao antoka fa manome fotoana ho an'ny Alpenzoo Innsbruck.
Gaga be ny zanakao noho ireo bera volontsôkôlà, sakadia, voromahery volamena, loutre, ary salamander afo. Ireto dia vitsivitsy monja amin'ireo karazana biby ho hitanao ao amin'ny zoo Alpine. Raha mankafy ny biby ny zanakao, ho entin'ny mahatalanjona hevitra.
Afaka mankany amin'ity zoo mahavariana ity ianao amin'ny fitateram-bahoaka, avy amin'ny afovoan-tanàna. koa, misy isan-karazany ny safidy fandefasana zoo misy teti-bola, mba ho hitanao ny zava-drehetra.
Vidin'ny lamasinina any Munich mankany Innsbruck
Salzburg mankany amin'ny Innsbruck Train Prices
Oberstdorf mankany amin'ny vidin'ny fiaran-dalamby Innsbruck
Graz mankany amin'ny vidin'ny fiaran-dalamby Innsbruck
3. Zoo tsara indrindra any amin'ny Repoblika Czech: Zaridaina Prague Zoological
Prague dia malaza amin'ny tetezana mahavariana, fomba fijery mahafinaritra, maritrano, sy fety. Na izany aza, tsy betsaka ny olona mahalala ny momba ny zoo Prague, ary izany dia toeram-boninahitra eo amin'ireo zoo tsara indrindra any Eropa hitsidihana ankizy.
o.5 kilometatra toradroa dia mahatonga ny zoo Prague ho iray amin'ireo zoo lehibe indrindra any Eropa, trano fonenana mihoatra ny 4000 biby. Noho izany, misy pavily sy biby be dia be miarahaba, ohatra, Shanti ilay elefanta aziatika, Bikira, ny gorila mahay namana, ary biby maro hafa sy tsy manam-paharoa.
Ny zaridaina any Prague dia misokatra isan'andro ary azon'ny bus sy ny fitateram-bahoaka. Ny toro-hevitra ho an'ny fahafinaretana ho an'ny fianakavianay any Prague dia ny drafitra fitsangatsanganana an-dàlam-pianakaviana iray manontolo mankany amin'ny zoo Prague satria tena te hizaha izany rehetra izany ny zanakao.
4. 10 Zoo tsara indrindra any Eropa: Zaridaina Zoolojika Berlin
The oldest zoo in Germany is home to some of the extraordinary animals in the world. The Chilean flamingo and African Penguin are just a few of the special residents you’ll meet on your family visit to the Berlin zoo. Ny biby tsy fahita firy sy hafahafa dia mahatonga an'i Berlin ho iray amin'ireo zoo tsara indrindra hitsidika ny zanakao any Eropa.
Berlin Zoological Garden dia eo afovoan'ny iray ny tanàna mahaliana indrindra any Eropa, ary tsy ankanavaka ny zoo. Raha any an-tanàna ianao mandritra ny faran'ny herinandro lava, avy eo ianao dia tokony manokana fotoana manokana mandritra ny andro iray ao amin'ny zoo, trano rantsan-kazo, sy Aquarium.
Ny iray amin'ireo zavatra tsara indrindra amin'ity zoo ity dia ny misy vidin'ny tapakila manokana ho an'ny fianakaviana kely na lehibe, fidirana tokana amin'ny zoo, na combo miaraka amin'ny fidirana amin'ny aquarium.
Ny vidin'ny fiaran-dalamby any Frankfurt mankany Berlin
Leipzig mankany Berlin Ny vidin'ny lamasinina
Hanover mankany amin'ny vidin'ny fiaran-dalamby any Berlin
Ny vidin'ny lamasinina any Hamburg mankany Berlin
5. Zoo mahafinaritra indrindra eto Hamburg: Zagen Hagenbeck
Hamburg dia tsara toeran-tanàna vaky, ary tanàna mahafinaritra hitsidihana miaraka amin'ny ankizy. Ny Hagenbeck Tierpark any Hamburg dia ohatra iray amin'ireo zavatra mahafinaritra tokony hatao any Hamburg miaraka amin'ny ankizy. Izy io dia iray amin'ireo zoo mahafinaritra indrindra any Eropa sy Alemana. Trano malalaka misokatra ho an'ny 1,800 biby, ity Zoo mahafinaritra ity dia manana ny Oseana Arktika. Ny Ranomasimbe Arktika no manomboka ny fiainam-pianakavianao, ary mitsidika orsa polar, penguins, sy orsa-dranomasina.
Raha any Hamburg ianao mandritra ny andro vitsivitsy, dia tokony hahazo ny Karatra Hamburg ianao. Amin'izany no hankafizanao fihenam-bidy lehibe amin'ny manintona mpizaha tany, ary fihenam-bidy amin'ny zoo sy ny aquarium tropikaly ao amin'ny zoo.
Vidin'ny lamasinina any Berlin mankany Hamburg
Bremen mankany Hamburg Train vidiny
Hanover mankany Hamburg Train Prices
Ny vidin'ny Cologne mankany Hamburg Train
6. Zoo Antwerp any Belzika
Iray amin'ireo tampony 10 ny zoo tsara indrindra any Eropa dia ny Zoo Antwerp. Toy ny iray amin'ireo zoo mahavariana ao amin'ny lisitray ihany, ao amin'ny Zoo Antwerp dia afaka mankafy ireo biby tsara tarehy indrindra eto an-tany ianao. Na izany aza, iray amin'ireo zavatra mampiavaka ny Zoo Antwerp amin'ireo zoo hafa, no Program manokana ho an'ny biby tandindomin-doza, toy ny bonobos sy okapi.
Ny zoo tsara indrindra any Belzika dia nitatra be nandritra ny taona maro. Tena nitombo ny zoo ka tsy ao afovoan-tanàna, tena akaiky ny gara Central. Ary, ny Skywalk an'ny zoo no hanambara indrindra fomba fijery mahavariana ny zaridaina ary ny iray amin'ireo Tanàna tsy mataho-dàlana any Eropa.
Bruxelles mankany Antwerp Train vidiny
Ny vidin'ny Amsterdam hatrany Antwerpen
Lille mankany Antwerpen amin'ny vidin'ny fiaran-dalamby
Vidin'ny Paris hatrany Antwerpen
7. Zoo La Palmyre Ao Les Mathes, Frantsa
Ilay zoo tsara tarehy Les Mathes any La Palmyre dia miorina anaty ala maitso sy dongona. Misy làlana marihina izay mitondra anao sy ny ankizy hitsangatsangana manodidina ny tontolon'ny biby sy ny zava-mahatalanjona voajanahary amin'ny iray amin'ireo zoo tsara indrindra any Eropa.
Liona an-dranomasina sy saka dia, Carreabean flamingos, ary sokatra goavambe, dia vitsivitsy amin'ireo biby manokana hihaona aminao. Ity zoo mahafinaritra ity dia miorina ao amin'ny faritra New Aquitaine any Frantsa, amin'ny morontsiraka Atlantika, a great adventure from Paris amin'ny lamasinina.
8. Zoo Artis Any Amsterdam
Just 15 minitra miala ny afovoan-tanàna, ho hitanao ny zoo voalohany ao Amsterdam ary iray amin'ireo zoo tsara indrindra any Eropa. Artis Royal Zoo dia tranon'ny zebra, lolo, trondro tropikaly, ary ireo zavamiaina bitika indrindra izay hahasarika ny zanakao, amin'ny ARTIS-Micropia.
A ny fitsidihana ny zoo Amsterdam dia iray amin'ireo hetsika ara-pianakaviana tsara indrindra hatao any Amsterdam. Miaraka amin'ny tranoheva maro, mankany amin'ny aquarium, ary hazo terebinta taloha, ny Artis Zoo any Amsterdam dia iray amin'ireo sary mahafinaritra ary toerana manokana hitsidihana rehefa any Netherlands.
Aleo ianao mividy ny tapakilan'ny Artis Zoo sy Micropia mba hankafizanao izay rehetra atolotry ny zoo Amsterdam Royal.
9. Zoo tsara indrindra any Angletera: Zoo Chester
Ny zoo lehibe indrindra any Angletera dia ao Cheshire ary fonenan'ny mihoatra ny 35,000 biby. Ny zoo Chester dia iray amin'ireo zoo tsara indrindra any Eropa hitsidika ny zanakao satria maro ny biby sy zaridaina azo zahana. Misy biby avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao, toy ny lemur, vavahady lehibe, hornbill, ary biby maro hafa.
koa, raha manam-potoana hanitarana ny fitsangantsanganan'ny fianakavianao ianao, aza hadino ny mitsidika ireo zaridaina mahafinaritra ao amin'ny zoo. Ireo fanangonana voninkazo ao amin'ny zoo Chester dia manana anarana malaza eran'izao tontolo izao, ary miavaka tokoa ny orkide. Ny fitsidihana ny zoo Chester no hetsika ivelan'ny fianakaviana tonga lafatra.
Vidin'ny lamasinina mankany Amsterdam
10. Zoo tsara indrindra any Eropa: Basel Zoo Any Soisa
Ny zoo tsara indrindra any Soisa dia ao afovoan'i Basel. Tranon'omby avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao ny zoo Basel, ary ho hitanao ny biby tsirairay amin'ny mponina voajanahary ao anaty vala isan-karazany.
Zavatra iray hafa mahatalanjona mametraka ny zoo Basel amin'ny antsika 10 zoo tsara indrindra any Eropa, dia ny zoo an'ny ankizy. Eto ny zanakao dia hahazo fotoana sarobidy mihaona amin'ny biby fiompy erak'izao tontolo izao, Pet, ary omeo hanina izy ireo.
Ny fitsidihana ny zoo dia hetsika any ivelany mahavariana ho an'ny fianakaviana iray manontolo. Zaridaina sy ala maitso, biby sy zavamaniry miavaka, hahaliana sy hampifalifaly ny ankizy. The 10 zoo tsara indrindra any Eropa hitsidika ny zanakao, dia vatosoa miafina any Eropa, ary mendrika farafahakeliny fitsangatsanganana iray andro.
Ny vidin'ny Munich mankany Basel
Zurich mankany Basel Train vidiny
Bern ny vidin'ny lamasinina Basel
Geneva hatrany Basel Train vidiny
eto amin'ny Save A Train, ho faly izahay hanampy anao drafitra fitsidihana mahagaga ny zoo tsara indrindra any Eropa amin'ny lamasinina.
Te hampiditra ny bilaoginay "Zoo 10 tsara indrindra hitsidihana miaraka amin'ny zanakao any Eropa" amin'ny tranokalanao ve ianao? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-zoos-visit-kids-europe%2F Nyawang- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
traikefa nahafinaritra BestzoosEurope EuropeTraveling Europewithkids familyholiday ankizy Train Travel Travelingwithkids zoo